သင့်သွေးထဲမှာ သံဓါတ်ပမာဏ တိုးလာစေဖို့ နည်းလမ်း (၅)ချက် - Lifestyle Myanmar
သင့်သွေးထဲမှာ သံဓါတ်ပမာဏ တိုးလာစေဖို့ နည်းလမ်း (၅)ချက်
သံဓါတ်က ဟောမိုဂလိုဘင်နဲ့ သွေးနီဆဲလ်တွေ ဖွဲ့စည်းရာမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော trace element တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်သွေးထဲမှာ သံဓါတ်ပမာဏကောင်းရှိနေခြင်းက ကျန်းမာသော ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါပါတယ်။ သံဓါတ်ပမာဏ ကျဆင်းတဲ့အခါ တစ်သျှူးတွေက အောက်ဆီဂျင်အလုံအလောက် မရတော့ပါဘူး၊ ဒါက အားနည်းခြင်း၊ မောပန်းခြင်းနှင့် သွေးအားနည်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က သင့်မှာ သံဓါတ်ချို့တဲ့နေကြောင်း ပြောပါက သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကို လိုက်နာပြီး အောက်ပါအချက်တွေကို စစ်ဆေးပါ။
၁။ သံဓါတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာတွေ စားပါ
သင့်သွေးထဲမှာ သံဓါတ်ပမာဏကောင်းနေဖို့ ကျန်းမာပြီး မျှတသော အစားအသောက်စားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သံဓါတ်နည်းရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သံဓါတ်က ဓါတ်သတ္တုတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် တိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်ကို အခြေခံသော အစားအစာများမှာ သဘာဝအတိုင်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်အခြေခံအစားအစာတွေမှာ တွေ့ရတဲ့သံဓါတ်ဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ပိုစုပ်ယူလွယ်သော အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအရင်းအမြစ်မှာ အသား (အထူးသဖြင့် အနီရောင်အသား) ဖြစ််ပါတယ်။
အပင်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ သံဓါတ်က စုပ်ယူမှုနှေးကွေးသော်လည်း ကောင်းတာချင်းတော့ အတူတူပါပဲ။ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ အခွံမာသီးတွေမှာ သံဓါတ်ပါဝင်ပါတယ်။
၃။ ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝသော အစားအစာများ စားသုံးမှုကို တိုးမြှင့်ပါ
သံဓါတ်ကို ကောင်းစွာစုပ်ယူနိုင်ဖို့ ferritin သို့ ပြောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ hydrochloric acid နှင့် ဗီတာမင်စီပါဝင်သော အစာအိမ်ရည် ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝသော သံပုရာ၊ လိမ္မော်၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ဘရိုကိုလီနှင့် ပန်းငရုတ်ကဲ့သို့သော အက်စစ်ဓါတ်များတဲ့ အစားအစာတွေကို ထည့်စားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီက ခုခံအားစနစ်နဲ့ သံဓါတ်စုပ်ယူမှုအတွက် အရေးကြီးသော်လည်း အလွန်အကျွံစားသုံးပါက ဖောလစ်အက်စစ်ချို့တဲ့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်၊ တစ်နေ့လျှင် အချဉ်ပါတဲ့အသီးကို အများဆုံးနှစ်လုံးစားသုံးခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
၃။ iron-blocking အစားအစာတွေကို သင့်တင့်စွာစားပါ
သံဓါတ်ပမာဏ မြင့်တတ်စေသော အစားအစာများရှိသလို သင်ရှောင်သင့်တဲ့အခြားအရာတွေလည်း ရှိပါတယ်၊ ဆရာဝန်က သွေးအားနည်းရောဂါ (သို့) သံဓါတ်ချို့တဲ့မှုရှိတယ်လို့ပြောရင် ဒီအစားအစာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ကြက်ဥ… ကြက်ဥမှာပါဝင်တဲ့ phosvitn ဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ အပင်အခြေခံ သံဓါတ်ကို စုပ်ယူခြင်းကနေ တားဆီးပါတယ်။
နို့… နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှ ကယ်လ်စီယမ်ဟာ တစ်နေ့လျှင် ၃၀၀ မီလီဂရမ်ထက် ပိုစားသုံးပါက တိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်ထွက် ပစ္စည်းတွေမှ သံဓါတ်စုပ်ယူမှုကို တားဆီးပေးပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်… လက်ဖက်ရည်မှာပါတဲ့ oxalate က အပင်မှ သံဓါတ်စုပ်ယူမှုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ သံဓါတ်များစွာပါသော အစားအစာတွေနဲ့တွဲပြီး လက်ဖက်ရည်သောက်တာကို အကြံမပြုပါဘူး။
ချောကလက်နှင့် ကော်ဖီ… သူတို့ရဲ့ phenolic ဒြပ်ပေါင်းတွေက အပင်မှသံဓါတ်စုပ်ယူမှုကို ဟန့်တားပါတယ်။
အခွံမာသီး… အခွံမာသီးနှင့် တခြားအစေ့တွေမှာပါဝင်တဲ့ phytates တွေဟာ အားကောင်းတဲ့ သံဓါတ် blocker တွေလို လုပ်ဆောင်ပြီး သံဓါတ်စုပ်ယူမှုကို ၅၀-၆၅% အထိလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားရင် (သို့) ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် သံဓါတ်ဖြည့်စွက်ဆေးသောက်ပါ
ကိုယ်ဝန်ရှိပါက ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် သံဓါတ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်စွက်ဖို့ သံဓါတ်အားဖြည့်ဆေးတွေ သောက်သင့်ပါတယ်။ သင့်အတွက် သင့်တော်မယ့်အရာကို ရှာဖွေဖို့ ဒီအကြောင်းကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ သံဓါတ်ပမာဏနည်းရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းပေါ်မှုတည်ပြီး ဖြည့်စွက်ဆေးမသောက်ခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ သတိပြုရမှာက ဖြည့်စွက်ဆေးတွေက ကိစ္စတိုင်းမှာ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဖြည့်စွက်ဆေးအားလုံးက လူတိုင်းအတွက် မမှန်ပါဘူး။
၅။ Dietary fiber (အစားအသောက်မှာပါတဲ့အမျှင်ဓါတ်) ပမာဏအများကြီးကို ရှောင်ပါ
Dietary fiberက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အစာချေဖျက်မှုကို ထိန်းညှိပေးခြင်း၊ သွေးအတွင်း ကိုလက်စထရောကို လျှော့ချပေးခြင်းနှင့် colonic neoplasms ကဲ့သို့သော နာတာရှည်ရောဂါတွေမှ သင့်အား ကာကွယ်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော အရေးကြီးတဲ့အလုပ်များစွာ ရှိပါတယ်။ အမျှင်ဓါတ်စားသုံးခြင်းက သင့်အတွက် ကောင်းသော်လည်း အမျှင်ဓါတ်အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းက သင့်မှာသံဓါတ်နည်းနေတဲ့အခါ အကျိုးမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ ၎င်းက ဝမ်းသွားစေတာကြောင့် သံဓါတ်ဟာ သင့်အစာခြေစနစ်ကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဖြတ်သန်းရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သံဓါတ်စုပ်ယူမှုကို နည်းစေပါတယ်။
ကိုယ်ချစ်ရသူကို ကိုယ်ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်းပြသဖို့ နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင်က သူတို့ကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားသလဲ? သင်က သူတို့အတွက် ဘယ်လိုထူးခြားသလဲဆိုတာ သူတို့ကို သိစေချင်မှာပါ။ ဒီတော့ သင်ချစ်ရသူကို အထူးခံစားရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါမယ်။ ၁။သူတို့ကို...
ကိုယ်လက်ရှိတွဲနေတဲ့ ကိုယ်ရဲ့ချစ်သူက ကိုယ့်ဘဝအတွက် လက်တွဲဖော်အစစ် ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကို ဘယ်လိုသိရမလဲ? သင်တို့နှစ်ယောက်က ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီသူတွေဖြစ်ကြောင်း သင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? အခုပြောပြပေးမယ့် အချက်လေးတွေကတော့ သင်နဲ့ သင့်ပါတနာဟာ နတ်ဖက်တဲ့ဖူးစာတွေဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ (၆)ချက်ပါ။ ၁။ ဘဝအပေါ် အကောင်းမြင်စိတ်ရှိကြပါတယ်...
ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက် ဘယ်ဆီကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ? ဆီအမျိုးအစားအများကြီးရှိပေမယ့် သူတို့တစ်ခုစီက မတူညီတဲ့ ဟင်းလျာတွေအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဆီရဲ့အနံ့အရသာနဲ့သာ ပတ်သတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချို့သောဆီတွေက မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကို ခံနိုင်သော်လည်း တစ်ချို့ဆီတွေက မခံနိုင်ပါဘူး။ သင့်အစားအစာတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးဂုဏ်သတ္တိတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစေလိုတာကြောင့် ကြော်စားဖို့အတွက်...